Ukuphuza utshwala ngenkathi usebenzisa ama-antibiotic: Kuphephile yini ukuthi ukwenze? - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Ezokuzijabulisa Inkampani, The Checkout Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Cindezela Ukuphuma Ezemidlalo Ezisindayo Imfundo Yezempilo, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ungaphuza utshwala ngama-antibiotic?
Ungaphuza utshwala ngama-antibiotic?
Imfundo Yezempilo Ukuxuba
Ekugcineni! Impelasonto isilapha futhi usukulungele ukubuyela emuva ngeziphuzo ezimbalwa. Kodwa linda-usasebenza kuleyo nkambo yama-antibiotic udokotela wakho akunikeze ngesonto eledlule ngemuva kokuxilongwa kwakho (faka igama lesifo esibuhlungu lapha). Ingabe ukuphuza utshwala kuphephile? Noma kufanele ulinde uze usuqede uhlobo lwemithi futhi ungatheleleki ngokusemthethweni?
kanjani ukukhipha ukhunta ezinzwaneni
Imiphumela yotshwala ezifweni
Ukuze ululame mhlawumbe kungcono ukuvele weqe i-vino bese uzivolontiya esikhundleni somsebenzi okhethiwe womshayeli, kusho uBrian Werth, Pharm.D., Uprofesa osizayo I-University of Washington School of Pharmacy eSeattle.
Utshwala bunemiphumela yokuzivikela emzimbeni, futhi bungavimbela ikhono lakho lokulwa nokutheleleka okuphulelayo ama-antibiotic, kusho uDkt Werth. Futhi kungenza imiphumela emibi ethile yama-antibiotic ibe yimbi kakhulu.
Ukhuluma ngemiphumela emibi njengokucasuka kwesisu, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, nokuphelelwa amanzi emzimbeni, okuyimiphumela emibi ejwayelekile phakathi kwemithi elwa namagciwane eminingi — uma kungeyona yonke.
Uma uphonsa utshwala engxenyeni… ungathola ukuhlanganiswa kwalezi zinkinga, esho, enezela ukuthi lokhu ekugcineni kungakwandisa ukululama kwakho.
Ngaphezu kwalokho, ngokusho kweNational Sleep Foundation, ukuphuza utshwala kungaphazamisa ikhwalithi yokulala . Futhi njengoba ukulala kubaluleke kakhulu enkambisweni yokwelashwa, mhlawumbe kungcono kakhulu ukugwema noma yini ezokuvimbela ekutholeni ama-ZZZ anele ngenkathi amasosha akho omzimba esebenza ekulweni nalelo gciwane.
Kuphephile yini ukuxuba ama-antibiotic notshwala?
Mayelana nokuphepha kwangempela, izindaba ezinhle ukuthi akukho ukuphikisana okuqondile phakathi kokusetshenziswa kotshwala nemithi eminingi elwa namagciwane. Noma kunjalo, igama elingukhiye lapha lithi kakhulu . Imithi elwa namagciwane evamile efana amokfillin futhi azithromycin , ngokwesibonelo, aziphikiswa ( ngokusho kwamaCentre for Disease Control , kwemithi engama-270.2 million yemithi elwa namagciwane ebhalwe ngo-2016, izigidi ezingama-56.7 zazenzelwe i-amoxicillin kwathi ezingama-44.9 zayi-azithromycin). Kodwa abanye bakhona, futhi ukuzixuba notshwala kungaba yingozi, kusho uDkt Werth.
Imaphi ama-antibiotic ongakwenza hhayi uphuze notshwala?
Kunemithi elwa namagciwane ethize enokuxhumana okuqondile nendlela yokuphuza utshwala, kusho yena. Futhi yizo lezo ezibeka engcupheni enkulu yokuba nomthelela omubi ngqo ekuphathweni ngokubambisana notshwala.
Izidakamizwa okukhulunywa ngazo? I-Flagyl ( metronidazole ; lokhu kubandakanya imiyalo yamafomu esitho sangasese sowesifazane kanye nefomu lethebhulethi yomlomo), iTindamax ( tinidazole ), IBactrim ( i-sulfamethoxazole-trimethoprim ) kanye Zyvox ( umugqa ) ngabaphulamthetho abakhulu. Uzodinga gwema utshwala nemikhiqizo equkethe utshwala ngenkathi uthatha le mithi, Okuningi izinsuku ezimbalwa ngemuva kokuthatha i-metronidazole noma i-tinidazole.
Qiniseka ukuthi uhlola amalebula emithombo yotshwala efihliwe; imithi yokuwasha umlomo noma ukukhwehlela ingaqukatha utshwala. Usokhemisi wakho ungumthombo omkhulu uma udinga usizo!
Imiphumela emibi yotshwala nama-antibiotic
Kodwa-ke, esimweni lapho wena yenza gcwalisa ngomuthi owodwa walokhu, qaphela ukuthi ukuxuba lawa ma-antibiotic notshwala kungadala ukuhlangana okunzima kwezidakamizwa, okungaholela kulokhu: ukulimala kwesibindi, umfutho wegazi ophakeme, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ukugeleza kwesikhumba, ukozela, isiyezi, nekhanda. Amanye ama-antibiotic, njengeZyvox, angaba nokusabela okubi kakhulu ezinhlotsheni ezithile zotshwala, njengobhiya kapompi noma iwayini elibomvu. Ngalezi zizathu, ukuphuza noma yiliphi inani lotshwala kufanele kugwenywe ngokuphelele ngenkathi uthatha le mithi, ngokusho koMayo Clinic .
Vele, lezi yizinkombandlela ezijwayelekile. Ukukhuluma ngqo nodokotela wakho noma usokhemisi mayelana nemithi yakho kadokotela ethile kunconywa njalo. Futhi okubaluleke kakhulu, uma usola ukuthi uhlangabezana nokuhlangana kwemithi akukaze kube buhlungu ukubiza udokotela wakho, kusho uDkt. Werth.
Uma othile ezizwa kabi kakhulu, kungakuhle ukuthi uhlolwe, usho kanjalo.
Umhlahlandlela WamaProtheni Oshibhile: Qhathanisa, Thenga & Gcina
Ama-Starter Kits ama-5 Ahamba phambili Wokulahlekelwa Isisindo
izimpawu zohlelo b zihlala isikhathi esingakanani
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-diflucan yelaphe ukutheleleka kwemvubelo
I-linzess ihlala isikhathi esingakanani kusistimu yakho
kukhona uhlobo oluthile lwe-eliquis?
Nginganika ingane i-benadryl ne-zyrtec
kufanele kube yini ukushisa komzimba okujwayelekile
lahla ukutheleleka kwemvubelo ekhaya